Heshiisyaddii Sababta u Ahaa In la Khaarajiyo Madaxweyne C/rashiid Cali Sharmaake 5o Sano Ka hor. |
Heshiisyaddii Sababta u Ahaa In la Khaarajiyo Madaxweyne C/rashiid Cali Sharmaake 5o Sano Ka hor.
Madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya si dimoqraadi ah loogu doortay, Cabdirashiid Cali Sharmaake, ayaa la dilay 15-kii October 1969-kii oo ay kasoo wareegatay muddo ku suntay 50-sano.
Khaarijintiisa oo la rumeysan yahay in ay ahayd mid siyaasadeysan uuna ka dambeeyay askari boolis ah kaasoo ilaaladiisa kamid ahaa ayaa ka dhacay magaaladda Laascaanood. Gacan ku dhiiglaha ayaa durba la toogtay.
Alle ha u naxariistee Sharmaake ayaa 1960-kii illaa iyo 1964-tii wuxuu wasiirka koowaad ee xukuumadda uu u ahaa Aadan Cabdulle Cismaan. Isla markii uu xilku qabtay waxa uu dhiirogeliyay dhaqdhaqaaqyadii gobanimo doonka.
Mudadii uu xafiiska joogay Soomaaliya ayaa dagaalo qaraar la gashay Itoobiya oo ciidamo iyo hub culus haysatay. Kaliya xoogaga Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay saddex kun oo bilaa hub iyo gaadiid ah balse aad u dhiiran.
Hadaladdii taariikhda galay ee aadka loogu xasuusto lagana qabtay intii ay dagaaladdu socdeen oo ay Soomaaliya iska difaacday Itoobiya waxaa kamida “gacan waan ku dagaalameynaa, gacanna doorashadan ku galeynaa”.
Markii dagaalku istaagay dalkana ay ka dhacday doorasho dibna uu ugu soo laabtay ra’iisul wasaare-nimadda ayaa waxa uu socdaal taageero raadis ah uu ugu baxay dalal ay ku jiraan; France, UK, Germany iyo Canada.
Ujeedada ugu weyn ee safarkiisa ayaa lagu sheegay dhismaha ciidamadda xoogan oo ay Soomaaliya yeelato si ay dib ugu soo ceshato dhulalka ka maqan. Balse, socdaalkiisa wuxuu ahaa mid aanan wax miro dhan ah kasoo bixin.
Heshiisyadii “sababay” dhimashadiisa
Isaga oo ka qeybgalaya Shirka loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay, waxa ay wada kulmeen Wasiirka Arrimaha Dibadda Russia, kaasi oo uu u bandhigay qorshihiisa dhismaha ciidan xoog leh oo ay Soomaaliya hesho.
Ra’iisul wasaarihii dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Yuusuf oo dilka madaxweynaha usoo joogay ayaa wuxuu dib uga faaloodey xusuustiisa.
Wada hadalo kadib ayay isla qaateen in ay u wada safraan Ruushka. Sharmaake waxaa xiligaas wehliyay Wasiiradda Arrimaha Dibadda, Difaaca iyo saraakiisha kala duwan ee Ciidamadda Qalabka Sidda ee Soomaaliya.
“Miis baa loo keenay, waxaa la yiri ‘waxaad ku qortaa waxaad rabtaan’ 20-kun oo ciidan, hubkood, taangi iyo wax walbaa lagu qoray,” ayuu Yuusuf ku sheegay wareysi uu siiyey VOA-da laanta Af Soomaaliga.
Maadaama uu xifaaltan ka dhaxeeyay, reer Galbeedka ayaa aad uga carooday bogga cusub ee u furmay xiriirka Soomaaliya iyo Ruushka, waxayna cadaadis xoogan saareen madaxweynihii waqtigaas dalka xumayey.
Yuusuf ayaa ka jawaabaya sababta loo dilay Sharmaake: “Midowgii Suufiyeenti [Ruushka] buu xiriir la sameeyay 17-mashruuc baa la saxiixay oo ciidanka, shirkadaha iyo waxbarashada, dabadeedna Midowgii Suufiyeenti iyo Dowladda Soomaaliya ayaa isku dhawaaday, markaas ayaa nimanka reer Galbeedku ka xumaadeen dabagalna ku sameeyeen”.
Kadib doorashadii qabsoontay 1964-tii, Sharmaake ayaa waxa uu waayey jagadiisa, waxaana ra’iisul wasaare noqday waqtigaas Cabdirisaaq Xaaji Xuseen xili Aadan Cabdulle Cismaan uu difaacday kursigiisa.
Sidda laga soo xigtay Yuusuf, in Sharmaake la eryo waxay ka dambeysay markii ay madaxweynaha saameeysay dhabar ka taabashada reer Galbeedka oo Sharmaake u arkayey “caqabad”.
– Madaxweyne –
Kadib doorashadii madaxweynaha ee qabsoontay 1967-dii ayaa waxa uu Cabdirashiid Cali Sharmaake kusii baxay xilka madaxweynaha, isaga oo ra’iisul wasaare ka dhigtay Maxamuud Xaaji Cigaal, oo ka tirsanaa xisbiga SNT.
“Cigaal oo xisbiga SNT ka tirsanaa ayaa intii ay reer Galbeedku la hadleen waxaa la yiri ‘SNT kasoo tag Leegada tag, Cabdirashiid baa soo bixi doono’. Cabdirashiid-na la hadleen la yiri ‘Cigaal ra’iisul wasaare ha dhig’ wax waan wada qeyb-saneynaayeen tanaasulaad buu la galay,” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Wuxuu intaasi ku daray: “Markaad kadib reer Galbeedku aad buu xirmay. Kolka maxaa dhacay? Waxaa dhacay shacabkii oo kacay, Soofiyeedku gacanta ku hayaan meeshuu doono qabsan karo. Reer Galbeedku waxay ku fekereen marka in Cabdirashiid meesha ka saaraan, ciidanka la bedelo, rag iyaga ah [reer Galbeedka] la keensado”.
Dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii waddanka afgembi kula wareegay ciidamadii militariga ee uu hoggaaminayey allaha u naxariistee Jeneral Maxamed Siyaad Barre, kaas oo dalka xukumayey in ka badan 30-sano.